DejaEdit သည်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Anna Knochenhauer | ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DejaEdit သည်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Anna Knochenhauer ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်ပူးပေါင်းမှုရှိသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည်
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Anna Knochenhauer က DejaEdit သည်ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးလိုအပ်သည့်အရေးပါသောပူးပေါင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အကြောင်းဖော်ပြသည်
22 မေလ 2020, Gothenburg, ဆွီဒင် - Anna Knochenhauer သည်လေးစားခံရသည့်စတော့ဟုမ်းအခြေစိုက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်သူ Post ဖြစ်ပြီးသူမ၏နာမည်တွင်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသည့်ခေါင်းစဉ်များပါရှိသည်။Euphoria ပီတိ"Alicia Vikander featuring; “ဆွီဒင်နိုင်ငံမှကြိုဆိုပါသည်Jason Priestly နှင့်အခြားသူများပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
VFX-heavy feature ရုပ်ရှင်နှင့် drama series များ၏အောင်မြင်သောအလုပ်ကိုပြသခြင်းအားဖြင့် DejaEdit သည်ထုတ်လုပ်မှုတိုင်းတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ်ထည့်သွင်းသင့်သည့်တော်လှန်ရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုသူကကြေငြာခဲ့သည်။ သူမသည်သူမထုတ်လုပ်ခဲ့သောမကြာသေးမီကရုပ်ရှင်များအပါအဝင် DejaEdit ကိုယခုသူမထုတ်လုပ်သည့်အရာများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။အာကာသထဲတွင်တစ်ယောက်တည်း"(2018)"White Wall"(2020) နှင့်"ငါတို့သည်ဤတယ်"(2020) ။
ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရပြီး၊ အန်နာ၏ဆွီဒင်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွင်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ကုမ္ပဏီ၏ Knochenpower မှတစ်ဆင့်မစတင်မှီ ၁၉၉၇ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အန်နာသည်မတိုင်မီကစတော့ဟုမ်းအမျိုးသားပြဇာတ်ရုံအကယ်ဒမီအကယ်ဒမီတွင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူသင်တန်းကို ဦး ဆောင်။ မထုတ်လုပ်မီ။ “ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစပြီးအလေးအနက်ထားရမယ်။မျက်ရည်မကျစေရ"(ခေါ်"Känn ingen sorg", Mårlind & Stein အားဖြင့်) နှင့်"၀ င်းဒိုးကိုတက်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့အသက် ၁၀၀ အရွယ်လူသား” သူမကဆက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။လူငယ်ဆိုဖီဘဲလ်Gila Bergqvist Ulfung နှင့်အတူ (Amanda Adolfsson မှ)အာကာသထဲတွင်တစ်ယောက်တည်းSonja Hermele နှင့်အတူ” (Ted Kjellsson နှင့် Henrik Ståhlမှ) ။
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Anna Knochenhauer (မူပိုင် Knochenpower)
သူမ၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထက်သန်စွာဖြင့်အန်နာက“ ဆွီဒင်မှာထုတ်လုပ်သူ post-အမြဲတမ်းလိုပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပရောဂျက်တစ်ခုထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ငါစီမံကိန်းများအကြားအမျိုးမျိုးပျော်မွေ့ခြင်း, မြောက်မြားစွာနှင့်ဥရောပတစ်ဝှမ်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဒါရိုက်တာများအဖြစ် post- ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်, ။ Post-production အများအားဖြင့်ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲများသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကအလုပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်းပျော်စရာကောင်းသည့်ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုမကြာခဏထပ်ခါထပ်ခါထုတ်လုပ်သည်။
DejaEdit သည်အယ်ဒီတာများနှင့်အော်ပရေတာများအနေဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားမှုအကြားအလွန်ထိရောက်စွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မီဒီယာဖိုင် synchroniser ဖြစ်သည် လွန်စွာလိုလားသော တည်းဖြတ်ပလက်ဖောင်းများ။ “ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးအတွက် DejaEdit အပေါ်မှီခိုသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သောသို့မဟုတ်တင်သွင်းသောမီဒီယာဖိုင်များနှင့်အချိန်ဇယားများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်အခြားချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်၏ကွန်ယက်သိုလှောင်မှုသို့ထင်ဟပ်စေရန်သေချာစေသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဒီအရာအားလုံးဟာနောက်ကွယ်မှာတကယ်မြန်မြန်၊ အန်နာကအတည်ပြု။
DejaEdit ၏အက်ပလီကေးရှင်းများတွင်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအယ်ဒီတာများအားစီမံကိန်းတစ်ခုတည်းတွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်တည်နေရာအခြေပြုအယ်ဒီတာများ၊ DIT နှင့် VFX အိမ်များအကြားဖိုင်ဖလှယ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်စီမံကိန်းများကိုနေရာတိုင်းနှင့်အချိန်မရွေးဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ - အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို သုံး၍ လိုအပ်သောမီဒီယာဖိုင်များ၏ဒေသတွင်းမိတ္တူကိုချိန်းပါ။
အန်နာသည်သူမ၏အခန်းကဏ္ why သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးရကြောင်းဖော်ပြထားသည် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် DejaEdit သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်မည်သို့ကူညီသည်၊ “ ကျွန်ုပ်၏အခန်းကဏ္partsတွင်အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုမြင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အဓိက ဦး စားပေးလုပ်ငန်းသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာအပြည့်အ ၀ ဖြစ်သည်။ - ကင်မရာများမှ၊ အသံဖမ်းစက်များအထိ၊ နောက်ဆုံးသခင်မှတဆင့်လမ်းအပေါင်းတို့။ ဤဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးသည်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိပဲအလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ meta meta အချက်အလက်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ DP များ၊ ထုတ်လုပ်သူဒီဇိုင်နာများနှင့် VFX ကြီးကြပ်သူများနှင့်အစောဆုံးအလုပ်လုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ VFX ပါ ၀ င်နိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသောမြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်ပုံရိပ်များကိုအတူတကွအဖြေရှာနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ရိုက်ကူးမှုစတင်သည်နှင့်အန်နာ၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာအယ်ဒီတာများထံအမြန်ဆုံးရောက်ရှိရန်လုံခြုံစွာကူးယူခြင်း၊ ကူးခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းစသောအကြောင်းအရာများကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ DejaEdit သည်မီဒီယာအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ထားသော Avids များအားလုံးသို့အလိုအလျောက်ရောက်ရှိစေရန်သေချာစေရန်အချက်သည် Assistant Editor (AE) သို့မဟုတ် Editors များသည်ပျောက်ဆုံးနေသောမီဒီယာဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်မလိုပါ။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အချိန်များစွာယူလေ့ရှိပြီးအထူးသဖြင့်ကျောင်းအလုပ်ဟောင်းဟောင်းရှိ AE အတွက်ဖြစ်သည်။ DejaEdit သည်အချိန်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားများစွာကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်သော“ MEDIA OFFLINE” ဆိုင်းအင် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရခဲသည် လွန်စွာလိုလားသော တော့ဘူး၊ DejaEdit ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ”
ထုတ်လုပ်မှုတွင်အန်နာ၏အချိန်များစွာသည် VFX ရောင်းချသူများနှင့်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အယ်ဒီတာများနှင့် AE တို့က“ ငါ VFX ရောင်းချသူ DejaEdit ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုများစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေကြောင်းတွေ့ရှိရသည် အလုံးစုံကိုဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
DejaEdit သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုကျွန်ုပ်ချဉ်းကပ်ပုံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူမက“ DejaEdit ဟာအခုတော့ငါ့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီ။ ဤမကြာသေးမီကထုတ်လုပ်မှုများအရ DejaEdit ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ DIT (Digital Imaging Technician) နှင့် AE ပေါင်းစပ်မှုသည်ရိုက်ကူးစဉ်အတွင်းအဝေးမှပူးပေါင်းနိုင်ခြင်း၊ အယ်ဒီတာများအားပုံရိပ်တစ်ခုအားမည်မျှလျင်မြန်စွာတည်းဖြတ်နိုင်သည်ကို၎င်းမှတစ်ဆင့် DejaEdit ၏ထိရောက်မှုသို့ကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့်ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ ပတ်ပတ်လည်။ "
အန်နာကထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်မှာ“ DejaEdit နဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာအလုပ်လုပ်ရတာဟာကျွန်တော့်အတွက်တော်တော်တော်တဲ့တော်လှန်ရေးပါဘဲ။ ဒါကစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်ပါစေ။ နောင်အနာဂတ်တွင် DejaEdit သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်”White Wall"နှင့်"ငါတို့သည်ဤတယ်"။
သူမမကြာသေးမီကထုတ်လုပ်ခဲ့သောနှင့်ထုတ်လုပ်ပြီးသောထုတ်လုပ်မှုများတွင် DejaEdit သည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် post လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သို့လွယ်ကူချောမွေ့စေခဲ့သည်ကို Anna မှခေတ္တမျှသိရှိစေသည်
“ DejaEdit” သည်စီမံကိန်းဖိုင်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်မည်သို့ကူညီခဲ့သနည်း။အာကာသထဲတွင်တစ်ယောက်တည်း"
ကလေးများအတွက် SCI-FI စွန့်စားမှုရုပ်ရှင်ကားတွင်အန်နာသည် DejaEdit ကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။အာကာသထဲတွင်တစ်ယောက်တည်းTed Kjellson က Nordisk Film / TrustNordisk အတွက်ဒါရိုက်တာနှင့် Chimney မှပူးတွဲထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် SEK ဘတ်ဂျက်သန်း ၂၀ အတွင်းမျှမျှတတ VFX ကြီးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ မီဒီယာအားလုံးကိုထိရောက်စွာကူးယူနိုင်ခြင်း လွန်စွာလိုလားသော DejaEdit ကိုအသုံးပြုသောဘူတာများသည်ဤစီမံကိန်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကဖြစ်ခဲ့သည်။
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။အာကာသထဲတွင်တစ်ယောက်တည်း"မြောက်ပိုင်းဆွီဒင်ရှိLuleåအပြင်ဘက်ရှိစတူဒီယိုတစ်ခုတွင်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကျန်အဖွဲ့များသည်မြို့ကြီးများနှင့်အဆောက်အအုံများတွင်တည်ရှိပြီး DejaEdit ၏မီဒီယာဖိုင်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ Theo Lindberg သည်စတော့ဟုမ်း၏ပြင်ပအခြေစိုက်စီမံကိန်းတွင်အပိုတည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။ Boutique post house CAN Film သည် Gothenburg ရှိ၎င်းတို့၏တည်နေရာမှ back up အပြင်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အပါအ ၀ င်လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
ဤစီမံကိန်းတွင် DIT Adam Söderholmသည်ထပ်တူပြုထားသည့်ဗီဒီယိုများကိုတံဆိပ်ကပ်ရန်အသံဖိုင်များအမည်များကို အသုံးပြု၍ ချွတ်ချွတ်ခြင်း၊ အရန်ကူးခြင်း၊ တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်း၊ QC နှင့် transcode အတွက် Colorfront Express နေ့စဉ်သတင်းစာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူသည် h264 / mp4 နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများကိုထုတ်ပြီးသင်္ဘောသားများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် io.gates ၏အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းသို့တင်ခဲ့သည်။ DNxHD36 / MXF ပုံစံများအတွက်ဖိုင်များကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ လွန်စွာလိုလားသော.
ပထမသုံးပတ်တွင်သင်္ဘောသားများသည်ဆုရရှိခြင်းကြောင့်ကံကောင်းခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသော DejaEdit မှတစ်ဆင့် DIT မှရရှိသောအကြောင်းအရာများကိုရုပ်ရှင်ကိုစတင်တည်းဖြတ်သူအယ်ဒီတာ Hanna Lejonqvist သည်အဓိကတည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။ မကြာမီတွင်စတူဒီယိုတွင်အခြေပြုသည့်အယ်ဒီတာဟန်နာသို့မဟုတ်စန်ဒိုးမြို့ပြင်တွင်အခြေချနေထိုင်သောအယ်ဒီတာသီအိုသည်အယ်နာသည်အားလပ်ရက်အနားယူစဉ်ကမြင်ကွင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် လွန်စွာလိုလားသော။ ကင်မရာကဒ်တစ်ခုလုံးပြည့်သွားသည်နှင့်သင်္ဘောသားများသည်ကင်မရာကဒ်နှင့်အသံကဒ်ကို DIT သို့ပို့ပေးပြီးအလွန်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အန်နာကရှင်းပြသည် - DIT သည်တစ်ခုတည်းသောချခြင်း၊ အရန်ကူးခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ အလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသာမကအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော်လည်း လွန်စွာလိုလားသောသူသည်ဤအရာအားလုံးကို ၈ နာရီအလုပ်လုပ်သည့်နေ့၌အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ရဲ့လက်ထောက်အယ်ဒီတာ (အေအက်ဒီ) အန်နာဖောင်ဒင်ကိုရိုက်ကူးပြီးတဲ့အချိန်အထိတောင်မှယူဖို့မလိုပါဘူး၊ ပြီးတော့အဲဒီအချိန်မှာတောင်မှသူမရဲ့အချိန်တစ်ဝက်လောက်ပဲလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ DejaEdit သည်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရိုးရာနည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလုပ်အတွက်အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အန်နာက“ DeoEdit ၏“ ToSet” လုပ်ဆောင်ချက်သည်သူ၏မြို့တော်နှင့်ဝေးသောနေရာမှကျွန်ုပ်တို့အတွက်၎င်းကိုစုဆောင်းသောအခါအလွန်လက်တွေ့ကျသည်။ နေ့လည်စာတိုင်းထုပ်ပြီးငါတို့ရဲ့ဒါရိုက်တာ Ted တစ်ယောက်ဝင်လာတယ် လွန်စွာလိုလားသော မနေ့ကမြင်ကွင်းများ၏တည်းဖြတ်ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ထိုမနက်ခင်းတွင်ရိုက်ကူးထားသည့်စတူဒီယိုရှိ suite ။ DejaEdit ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
DIT သည်အော့ဖ်လိုင်းဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များကိုလည်းတင်သွင်းခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသောအယ်ဒီတာအတွက်အခြေခံအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်သူသည် DejaEdit ကို သုံး၍ မီဒီယာနှင့်အတူစီမံကိန်းဖိုင်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်ရုပ်ပုံလွှာထုတ်လုပ်မှုနှင့် VFX လုပ်ငန်းများကိုစတော့ဟုမ်းရှိချန်နီကကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီးLuleåနှင့် Stockholm ရှိ Ljudbang တွင်အသံကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
"အာကာသထဲတွင်တစ်ယောက်တည်း” ထိရောက်စွာ DejaSoft တည်ထောင်သူများပိုင် CAN Film တွင် DejaEdit ၏ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကဒီစီမံကိန်းကြောင့်ကျွန်တော့်အတွက်သာမကလုပ်ငန်းခွင်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့ CAN ရုပ်ရှင်မှာရှိတဲ့အသင်းအတွက်ပါအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အန်နာမှတ်ချက်ချသည် -“ ငါကန ဦး တင်ဆက်မှုပြီးတဲ့နောက်ဒီစနစ်ကိုလုံးဝသဘောကျခဲ့တယ်။ DejaSoft သည်ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်အရထပ်မံပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်အချို့ကိုဖန်တီးပြီးနောက်၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ။ DejaEdit ကိုသုံးပြီးနောက်မှပြန်လှည့်မကြည့်နိုင်တော့ပါ။ ”
DejaSoft ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Clas Hakerödက“ အန်နာဟာဒီထက်ပိုပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတာသေချာတယ်။ သူမသည်နောက်ဆုံးအခွင့်အာဏာရှိခဲ့ပြီး DejaEdit ကိုသူမ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည့်ရိုက်ချက်များကိုခေါ်နိုင်သည်။ သူဟာ DejaEdit နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတကယ့် live project မှာညှိပြီးကူညီပေးရတာအရမ်းပျော်တယ်။ ”
DejaEdit သည်“ အတွင်းဝေးလံသောပူးပေါင်းမှုကိုမည်သို့ enable လုပ်သနည်း။White Wall"(2020)
လာမည့်ဒရာမာစီးရီး“White Wall"အေSalmenperäနှင့် A. Zackrisson တို့ညွှန်ကြားသည့် SVT / YLE / DRG အတွက်" အဓိကအားဖြင့်ဖင်လန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဝေးလံခေါင်သီသောရွာတစ်ရွာတွင်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Samu Heikkiläသည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် လွန်စွာလိုလားသော အယ်ဒီတာများသည်ဟယ်လ်စင်ကီပြင်ပရှိသူ၏စတူဒီယိုမှစီမံကိန်းနှင့်အဝေးမှအလုပ်လုပ်သည်။ ပရောဂျက်တွင်လုပ်ကိုင်နေသောအခြားအယ်ဒီတာမှာ Kristofer Nordin ဖြစ်ပြီးစတော့ဟုမ်းအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ Assistant Editor (AE) Sanna Carlson လည်းတည်ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အပြီးတွင် Sanna သည် Samu နှင့် Kristofer တို့ကိုဝေးလံသောနေရာများတွင် DejaEdit ကို အသုံးပြု၍ မီဒီယာဖိုင်ဖလှယ်ခြင်းများကိုကူညီနိုင်ခဲ့သည်။
“ DjaEdit ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုမှာ AE အတွက်လိုအပ်ချက်မရှိပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DIT က Silverstack Lab နဲ့အလိုအလျောက် sync လုပ်ပြီးဖိုင်တွေကိုသွင်းလိုက်တာပါ။ လွန်စွာလိုလားသော အယ်ဒီတာများအဘို့။ Deit သည်အရေးကြီးသည်မှာ DejaEdit သည်အကြီးအကျယ်ကူညီခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် DIT သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအပြင်အလုပ်ချိန်အတွင်း AE အလုပ်၏သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ရိုက်ကူးစဉ် AE ကိုအားကိုးစရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့် AE Sanna သည်စီမံကိန်းကိုနောက်ကျသောအဆင့်တွင်သာစတင်ရန်လိုအပ်ပြီး VFX အလွန်ကြီးသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ VFX အယ်ဒီတာအဖြစ်နှစ်ဆတိုးခဲ့သည်။ ”
အရောင်ခွဲခြင်း၊ အွန်လိုင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ခြင်းအပါအ ၀ င် VFX, DI ကို DejaEdit အသုံးပြုသော Helsinki အခြေစိုက် Post Control တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Anna ကချဲ့ထွင်သည်မှာ DejaEdit ကို VFX တစ်ခုလုံးတွင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ Post Control မှအရောင်ခွဲခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းစင်မြင့်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ AE သည်အော့ဖ်လိုင်းတွင် VFX ကြီးကြပ်သူ Tuomo Hintikka နှင့်အလွှာများအတွင်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်မြင်ကွင်းများကိုအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။ slab comps ကဲ့သို့သူသည်မီဒီယာဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာအပြန်အလှန်ပေးပို့နိုင်သည် လွန်စွာလိုလားသော။ VFX လည်ပတ်မှုများနှင့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး၏လည်ပတ်မှုအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးခင် Tuomo နှင့်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရန် VFX ရိုက်ချက်များသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုဤနည်းဖြင့်မျှဝေရန်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ယခုမှစ။ , အားလုံးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နောက်ဆုံးရလဒ်များအပေါ်အနည်းငယ်မျှသာအမှားများရှိခဲ့ပါတယ်, ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိသိသာသာအရှိန်မြှင့်ကြောင့်သိသိသာသာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
DejaEdit ၏“ file sharing” ကဏ္ powerfulငါတို့သည်ဤတယ်"(2020)
ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲ“ငါတို့သည်ဤတယ်Patrik Eklund က SVT / Viaplay / Banijay အတွက်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ Peter Wendin နှင့်Hélène Berlin တို့သည်ဤစီမံကိန်းတွင်အယ်ဒီတာများဖြစ်ကြသည် လွန်စွာလိုလားသော စတော့ဟုမ်းရှိ Ljudbang တွင်တည်ရှိသည်။ ကိုယ့် "အတွက် post-set ကိုအတူWhite Wall“ DIT ဝီလျံဒယ်လ်ရီယိုသည် Dist William Del Rio သည်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ၊ တင်ပို့ခြင်း၊ backup လုပ်ခြင်း၊ လွန်စွာလိုလားသော အယ်ဒီတာများအဘို့။ AE Teddy Scherlin သည်ရိုက်ကူးပြီးသည်နှင့်အယ်ဒီတာများအားဖိုင်တင်ပို့မှု၊ VFX - လည်ပတ်ငွေကြေးများနှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးအပြည့်အစုံကိုကူညီရန်အချိန်တစ်ဝက်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေါ်သို့တက်ခဲ့သည်။
အန်နာဤသို့ဆက်ပြောသည် -“ ကျနော်တို့ Gothenburg ရှိ CAN ရုပ်ရှင်၏ရုပ်ပုံ post စက်ရုံနှင့် VFX ရောင်းချသူ DUPP Film တွင် DejaEdit ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီးသော Post များတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော VFX လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် DejaEdit တွင်တူညီသောထိရောက်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။White Wall” ထပ်တလဲလဲအော့ဖ်လိုင်းမှာ DejaEdit က AE ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အလွှာရှိမြင်ကွင်းများနှင့်မီဒီယာလွှဲပြောင်းခြင်းကို DUPP Film မှာအလွယ်တကူဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ”
အန်နာကထပ်မံမှတ်ချက်ချသည်မှာ“ post post အချို့သည် DejaEdit နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိသေးပါ။ နေ့စဉ်သတင်းစာများနှင့် Silverstack LAB ရှိအလိုအလျောက် sync လုပ်ဆောင်မှုသည်ပိုမိုဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သော work- လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ၄ နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တာမျိုးပေါ့။ အမှုအရာလုပ်ခြင်း၏ဟောင်းနွမ်းသောနည်းလမ်းသည်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံများကိုစာသားအတိုင်းစီးဆင်းသွားစေကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။ DejaEdit သည် VFX ရောင်းချသူ၏ I / O-position တွင်လည်းအရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
အယ်နာသည်အယ်ဒီတာများက DejaEdit သည်သူမ၏ထုတ်လုပ်မှုများတွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ သူတို့အားလုံးဟာ DejaEdit နဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အကောင်းမြင်ခဲ့ကြတယ်။ တခါတရံသူတို့ AE အပြည့်အဝရောက်ရှိဖို့ဆန္ဒရှိသည် လွန်စွာလိုလားသော တမင်တကာမျှဝေခဲ့သည့်ရုံမယ့်စီမံကိန်း။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် AE သည် DejaEdit မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်သောအရာအချို့ကိုပြင်ဆင်ရန်သူတို့မရှိသောအခါတည်းဖြတ်သူများ၏အစုံလိုက်ထဲဝင်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးအဆင့်မြှင့်တင်နေပြီးထိုပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းနေ ။ "
DejaSoft မှ CTO မှ Nikolai Waldman ကနိဂုံးချုပ်ပြောကြားသည်မှာ“ Anna ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများထံမှထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောတုံ့ပြန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောကြောင့် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုများကိုအထောက်အကူပြုသော DejaEdit တွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအသစ်များကိုအစဉ်မပြတ်ပြုလုပ်နေသည်။ လာမည့် DejaEdit ၏ဗားရှင်း ၃ တွင်ဖောက်သည်များတောင်းဆိုသည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များပါ ၀ င်သည်။
Anna Knochenhauer သည်အလုပ်မများပါကသူမလက်တွင်“ SUB” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရေးသားထားသော Peter Modestij မှထုတ်လုပ်သည့်သူ၏ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့နှင့်အတူ DejaEdit ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်သည့်အဖွဲ့နှင့်အတူသူမအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ !
နောက်ကွယ်ရှိနောက်ကွယ်မှနောက်ကွယ်ရှိ Trailer နှင့် VFX ပြိုကွဲမှုကိုကြည့်ပါ။အာကာသထဲတွင်တစ်ယောက်တည်း" ဒီမှာ:
Anna Knochenhauer အကြောင်း - ဤနေရာတွင်သူမ၏အစုစုကိုဖတ်ပါ www.imdb.com/name/nm0461255/?ref_=fn_al_nm_1
DejaSoft အကြောင်း DejaSoft သည်ဆွီဒင်နိုင်ငံအခြေစိုက်တက်ကြွသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများတွင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းအသွားအလာစိန်ခေါ်မှုများကိုလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးသည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသူပါးရည်နပ်ရည်ထုတ်လုပ်သည့်ကျွမ်းကျင်သူများကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏အဓိက ဦး တည်ချက်မှာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှချောမွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်စနစ်ဖြစ်သော DejaEdit သည်ကမ္ဘာတွင်ပထမဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer, လွန်စွာလိုလားသော Nexis နှင့် EditShare။ DejaEdit သည်မီဒီယာနှင့်အချိန်ဇယားကိုအွန်လိုင်းမှအမြဲလိုလိုမလိုအပ်ဘဲကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအယ်ဒီတာများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားအလိုအလျှောက်နှင့်လုံခြုံစွာလွှဲပြောင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ လိုင်စင်များတွင် DIT, Editor, Assistant, VFX, Push and Full တို့ပါဝင်သည်။ DejaEdit ကိုစကင်ဒီနေးဗီးယန်းစျေးကွက်တွင်အောင်မြင်စွာတည်ထောင်ပြီးနောက် DejaSoft သည် ၂၀၂၀ အတွက်ကမ္ဘာလုံးသို့သွားနေသည်။ ဤနေရာကိုကြည့်ပါ။ DejaEdit tutorial များကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ထပ်ရှာဖွေပါ www.dejasoft.com
Facebook မှာ - www.facebook.com/dejasoft
LinkedIn တို့ - www.linkedin.com/company/dejasoft-ab
တွစ်တာ - @DejaSoft
“ အာကာသထဲတစ်ခုတည်း” ဓာတ်ပုံအကြွေး: Emil Nyström, Nice Drama AB
ခေါင်းစဉ် - Ella Rae Rappaport ကို Gladys၊ Henrik Ståhlကို Vojajer နှင့် Dante Fleischanderl တို့ကို Keaton ကဲ့သို့ပုံဖော်ထားသည့်ပုံ။
ဓာတ်ပုံအကြွေး: Alvi Pakarinen
စာတန်း - Vera Vitali ကို Helen အဖြစ်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပုံ
ဓာတ်ပုံအကြွေး: Peter Cederling, SVT
စာတန်း - Schiaffino Musarra ကိုဂျော့ခ်ျအင်္ဂလိပ်လိုပုံဖော်ထားတယ်
DejaSoft သည် DejaEdit 3.1 ကိုထုတ်ပြန်သည် - ဇူလိုင်လ 2, 2020
ထိပ်တန်းဖင်လန်နိုင်ငံ VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးသည် DejaEdit ကိုအသုံးပြုသည် - ဇွန်လ 26, 2020
SubtitleNEXT ဗားရှင်း ၅.၆ တွင်စာသားအသစ်အထောက်အကူအသစ်ပါရှိသည် - ဇွန်လ 16, 2020
လက်ထောက်အယ်ဒီတာ လွန်စွာလိုလားသော ရုပ်ရှင်နိုင်သလား မီးခိုးတိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တည်းဖြတ်မှု အရောင် grade နေ့စဉ်သတင်းစာများ ဒဂုံ DejaSoft DI DIT DUPP ရုပ်ရှင် တည်းဖြတ်ခြင်း တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာ အယ်ဒီတာ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ back up အယ်ဒီတာများ Euphoria ပီတိ ဖိုင်မျှဝေခြင်း ရုပ်ရှင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနျ Standard သစ်လွင်မှု Knochenpower မီဒီယာဖိုင် synchronizer မီဒီယာခွဲဝေမှု meta data တွေကို ထိုနေရာမှာပဲ အွန်လိုင်း စတင်ခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု ဝေးလံခေါင်သီပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဝေးလံခေါင်သီတည်းဖြတ်ခြင်း စီးရီး ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ရုပ်မြင်သံကြား VFX VFX- လေးလံသော Workflows 2020-05-22
နောက်တစ်ခု: Draco vario ultra HDMI 2.0 သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗွီဒီယိုဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုထုတ်လုပ်သည်